Wasiirka cusub ee Cadaaladda XFS oo khadka teleefoonka ay ku wada hadleen mas’uuliyin ka tirsan Dowladda Turkiga. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wasiirka cusub ee Cadaaladda XFS oo khadka teleefoonka ay ku wada hadleen mas’uuliyin ka tirsan Dowladda Turkiga.
Wasiirka cusub ee wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Jaamac C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo khadka lefoonka kula hadlay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda aan walalaha nahay ee Turkiga ayaa ka wada hadlay sida Turkiga uu u soo dhaweynayo dhismaha xukuumadda cusub ee raiisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay ku soo biireen wasiiro cusub.
Wasiirka cusub ee Cadaaladda XFS oo khadka teleefoonka ay ku wada hadleen mas’uuliyin ka tirsan Dowladda Turkiga. was last modified: October 24th, 2020 by Admin
Golaha Shacabka oo codka kalsoonida u qaadaya Xukuumadda Magacaaban
Daawo video Hay,ada D,d g Ayaa lagu Daha Furey Degmada baradale Ee Gobolka Bay .
Taliyaha Ciidanka Xooga dalka oo kormeeray Xarumaha Ciidamada ee Dhuusamareeb